လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သောလိင်အပြုအမူများနှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရိပ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖော်ပြမှုကိုပိုမိုဂရုပြုပါ။
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်အကဲဆတ်တွေကိုဦးတည် Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု
comments: ဤသည်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများအပေါ်ဒုတိယကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၏လေ့လာမှုဖြစ်သည် (လေ့လာမှုတွင်“ CSB”) ။ ဒီလေ့လာမှုကအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုမှတဆင့် cue-reactivity ကိုအကဲဖြတ်။ ဒီမတူဘဲ 2013 EEG လေ့လာမှု ဘာသာရပ်များသည်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့်လိင်ကွဲဆန့်ကျင်သူများဖြစ်ကြပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများသို့မဟုတ်အခြားစွဲလမ်းမှုအတွက်စစ်ဆေးခြင်းမခံရသည့်အတွက်ဤလေ့လာမှုကစေ့စပ်စွာတည်ရှိသည့်အာရုံကြောသိပ္ပံပရိုတိုကောများနောက်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များအားလုံးယောက်ျားနှင့်လိင်ကွဲ (ပျမ်းမျှအသက် 24) ။ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်ဘာသာရပ်များကိုစမ်းသပ်မှုများနှင့်မေးခွန်းလွှာများဖြင့်စစ်ဆေးသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှစ်ခုတွင်အသက်အရွယ်၊ လိင်နှင့် IQ နှင့်လိုက်ဖက်သောကျန်းမာသည့်လိင်ကွဲယောက်ျားများပါဝင်သည်။ ရလဒ်များသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားပြုသူများတွင်တွေ့ရသောရလဒ်များကိုထင်ဟပ်စေပြီး၊ အစောပိုင်းကဦးနှောက်လေ့လာမှု porn စွဲပေါ်မှာ။ ဒီလေ့လာမှုမှ:
CSB ဘာသာရပ်များအတွက်ပိုကောင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်စှဲပုံမမှန်အတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုလေ့လာမှုတွေအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှထပ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကြောင့်ဆေး cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနှင့် CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရန်ထစ်အငေါ့တုံ့ပြန်မှုအခြေခံစွဲ၏မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီအဘို့အထောကျပံ့ပေးအလားတူကွန်ယက်အတွက် CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြော reactivity ကို၏မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဆုံ။
Rob Weiss ၏ဆောင်းပါးကိုလည်းကြည့်ပါ နောက်ထပ်လေ့လာရစွဲလမ်း၏အခြားပုံစံများမှ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Links
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014 Aug 25;9(8):e105476. Doi: 10.1371 / journal.pone.0105476 ။ eCollection 2014 ။
Mechelmans DJ သမား1, Irvine M က1, BANCA P ကို1, အထမ်းသမား L ကို1, မစ်ချယ်က S2, မှဲ့တီဘီ2, Lapa TR1, Harrison NA3, Potenza MN4, Voon V ကို5.
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) အတော်လေးဘုံသည်နှင့်သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ CSB တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါသို့မဟုတ် non-ပစ္စည်းဥစ္စာ '' အမူအကျင့် '' စွဲတစ်ခုခုအဖြစ် conceptualized ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်လေ့မက်လုံးပေး salience ၏လုပ်ငန်းစဉ်များထင်ဟပ်ယုံကြည်ထားတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုအာရုံစိုက်ဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
ဤတွင်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအာရုံစိုက်ဘက်လိုက်မှုအကဲဖြတ်ရန်က dot စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်သုံးပြီးအသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်အထီးကျန်းကျန်းမာမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အထီး CSB ဘာသာရပ်များအကဲဖြတ်ရန်။ ကျနော်တို့ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်, CSB ဘာသာရပ်များအထူးသဖြင့်အစောပိုင်းလှုံ့ဆော်မှုအောင်းနေချိန်များအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုဘဲကြားနေတွေကိုအာရုံစိုက်ဘက်လိုက်မှုမြှင့်တင်ရန်ရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်တစ်ခုအစောပိုင်း Oriental အာရုံကိုတုန့်ပြန်မှဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုမှတိုးမြှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအကြံပြု.
ဤသည်တွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများမူးယစ်ဆေး-cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းဆင်တူတဲ့အာရုံကြောကွန်ယက်တွင် သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသောငါတို့မကြာသေးမီလေ့လာရေးနှင့်အတူအံ။ သာ. ကွီးမွတျအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်လိုသောထက်အကြိုက်နောက်ထပ်ဒီအာရုံကြောကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကိုအတူတကွ CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဆီသို့ထစ်အငေါ့တုံ့ပြန်မှုအခြေခံစွဲတစ်ခုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီအဘို့အထောကျပံ့ပေး.
ကိုးကား: et al Mechelmans DJ သမား, Irvine M က, BANCA P ကို, Porter L ကို, Mitchell က S နဲ့။ (2014) နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်အကဲဆတ်တွေကိုဦးတည်အာရုံစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု Enhanced ။ PLoS ONE9(8): e105476 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0105476
အယ်ဒီတာ: လီယိုနာဒို Chelazzi, Verona တက္ကသိုလ်, အီတလီ
Received: မတ်လ 12, 2014; လက်ခံခဲ့သည်: ဇူလိုင်လ 20, 2014; Published: သြဂုတ်လ 25, 2014
မူပိုင်: © 2014 Mechelmans et al ။ ဒါက၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့ Open-access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်, အရာမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွား, မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်ဖြစ်သည်။
ဒေတာကိုရရှိနိုင်: အဆိုပါစာရေးဆရာတွေ့ရှိချက်အခြေခံအားလုံး data တွေကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအပြည့်အဝရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါ။ အားလုံးသက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေကိုစက္ကူအတွင်းဖြစ်ကြသည်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: အဆိုပါလေ့လာမှုကိုအများအားဖြင့် Wellcome Trust မှမိဿဟာထောက်ပံ့ငွေ (093705 / Z ကို / 10 / Z ကို) မှတစ်ဦးထောက်ပံ့ငွေများကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Potenza ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ထံမှထောက်ပံ့ငွေ P20 DA027844 နှင့် R01 DA018647 နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲန်ဆောင်မှုများ၏ Connecticut ပြည်နယ်ဦးစီးဌာန, အဆိုပါ Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာတွင်; နှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသား Center မှသုတေသနဆုကိုလောင်းကစားအတွက် Excellence တစ်ရေးစင်တာ။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB), အစ, hypersexual ရောဂါသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲချေါအတော်လေးဘုံသည်နှင့်သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ် ။ CSB ၏ကြိမ်နှုန်းစိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအလားတူခန့်မှန်းအတူအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်း-based ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်%2မှ 4% ကနေအထိခန့်မှန်းထားပြီး -။ CSB တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါသို့မဟုတ် non-ပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ် "အပြုအမူ" စွဲလမ်းအဖြစ် conceptualized ထားပြီး . လက်ရှိဒေတာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (သို့မဟုတ်လောင်းကစားရောဂါ) ပေါ် အခြေခံ. မကြာသေးမီကအပြုအမူစွဲအဖြစ် DSM-5 အတွက် reclassified ခဲ့သည် ။ သို့သော် hypersexual ရောဂါနှင့်အခြားအလွန်အကျွံအခြေအနေများများအတွက်စံ DSM-5 များအတွက်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်ပေမယ့် , အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမှဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသို့မဟုတ်လိင်နှင့်စပ်လျဉ်းမမှန်မှုအခြေအနေများအပေါ်ကန့်သတ် data ကိုမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာ, DSM-5 ၏အဓိကအပိုင်းများတွင်မပါဝင်ခဲ့ကြသည် ။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ် CSB အပေါ်လေ့လာမှုများနှင့်မည်သို့ကတူညီပြခြင်းငှါသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ကနေကွဲပြားခြားနားမှုခွဲခြားအားထုတ်မှုများနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူကူညီလိမ့်မည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုလေ့လာချက်များ၏အခြေအနေတွင်တွေ့ရှိချက်အားမရ, CSB နှင့်မပါဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုဦးတည်အာရုံစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုအကဲဖြတ်ရန်။
စွဲလမ်းပုံမမှန်မူးယစ်ဆေးတွေကိုဦးတည်ရွေးချယ်အာရုံစိုက်မှုအတွက်ဘက်လိုက်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနေကြတယ် -။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်နှင့်အတူဘာသာရပ်များပစ္စည်းဥစ္စာ-related လှုံ့ဆော်မှုများရှိနေခြင်းအတွက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့လိုငွေပြမှုကိုပြသ . အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခံရဖို့သဘောထားအမြင်ဘို့လိုတဲ့သဘောထားကိုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမမှန်အတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုတဖြစ်နိုင်သောယန္တရားနောက်ခံအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုမက်လုံးပေးသင်ယူမှုသီအိုရီကိုထင်ဟပ်ဖို့ postulated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂန္အေးစက်၏လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်အထပ်ထပ်တွေကိုတွဲဖက်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူဤမူးယစ်ဆေးတွေကိုတစ်ခုမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်မက်လုံးပေး-စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများဆည်းပူး။ အဆိုပါမက်လုံးပေး salience မူးယစ်ဆေးတွေကို generalized ချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေကိုဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့် '' လိုခငျြ '' ဖြစ်လာဤသို့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းဆုပ်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာဆိုလိုတယ် -. ပစ္စည်းဥစ္စာ-related လှုံ့ဆော်မှုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုအရက်, နီကိုတင်း, ဆေးခြောက်, opiates နှင့်ကိုကင်းဘို့ဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်မှာပြခဲ့ကြ (အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ် , -) ။ အများအပြားက Paradigm မျက်စိလှုပ်ရှားမှုတာဝန်များကိုသည် Posner တာဝန်သည် Stroop တာဝန်နှင့်အစက်စုံစမ်းစစ်ဆေးအလုပ်တခုကို၏မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်မျိုးကွဲအပါအဝင် Attention Deficit တိုင်းတာရန်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ-related တွေကိုမှမျက်စိလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်အာရုံစိုက်မှုများ၏ဘက်လိုက်မှုဆေးလိပ်သောက်သူများမှာပြခဲ့ကြ  နှင့်ကိုကင်းစွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ ။ အဆိုပါ Stroop Task ကို, အစွဲ Stroop ၏တစ်ဦးကပြုပြင်မွမ်းမံ စကားလှုံ့ဆျော arousal များအတွက်အရောင်စကားများအစားထိုးခြင်းဖြင့်ရောဂါ-သက်ဆိုင်ရာတွေကိုအာရုံစိုက်တန်ဖိုး ။ သို့သော်ထိုသို့စွဲ Stroop တာဝန်တစ်ခုတဏှာ၏အကျိုးဆက်ထက်တင်းကြပ်စွာအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအဖြစ်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ၏အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုသို့မဟုတ်လျှော့ချဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားမှုအားဖြင့်ရှက်ကြောက်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည် , ။ စွဲ Stroop တာဝန်များကိုရောဂါ-သက်ဆိုင်ရာတွေကိုရန်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုသို့မဟုတ် prepotent တုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်သို့မဟုတ်တားစီးဖို့ကြိုးစားမှုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဆဲပါထိုသို့သော facilitated အာရုံစူးစိုက်မှုသို့မဟုတ်အခက်အခဲများအဖြစ်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအခြေခံသော့ချက် features တွေ, အကဲဖြတ်ရန်ပါဘူး , . ဆနျ့ကငျြဘမှာ dot စုံစမ်းစစ်ဆေးအလုပ်တခုကို ,  'dot စုံစမ်းစစ်ဆေးသို့မဟုတ်ပစ်မှတ်၏အနေအထား, အမြင်အာရုံပြသမူးယစ်ဆေး cue သို့မဟုတ်ကြားနေပုံရိပ်တွေများ၏အနေအထားမှဆွေမျိုးကြိုးကိုင်ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့်ဆဲပါဖြစ်စဉ်များ၏အကဲဖြတ်ဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက် , ။ အဆိုပါ Stroop နှင့်အစက်စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်အားဖြင့်အကဲဖြတ်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအစီအမံကိုလည်းမပတျသကျဘူး ,  အသီးသီးထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခွဲဝေအဖြစ်အသီးသီးဖြစ်စဉ်များကိုအာရုံစိုက်သည့်အစီအမံများနှင့်ကိုက်ညီ။ မတူညီသောတာဝန်များကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအဓိကတွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်ပေမယ့်ထို့ကြောင့်, တိုင်းတာသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကွာခြား။
ကျနော်တို့ CSB ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုလှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်ကြားနေတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအာရုံစိုက်ဘက်လိုက်မှုအကဲဖြတ်ရန်က dot စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်သုံးပြီးကျန်းမာတဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်ဖက်။ ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏အောင်းနေချိန်ဘာသာရပ်များအစောပိုင်း Oriental ပံ့ပိုးတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင် inhibitory တုံ့ပြန်ထိတွေ့ဆက်ဆံရှိမရှိအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပြသခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း , , ထိုတုံ့ပြန်မှုအစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းလှုံ့ဆော်မှု latency သို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုဆင်တူစှဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုမှလေ့လာတွေ့ရှိသည်ဟုတွေးဆ, ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအာရုံစိုက်ဘက်လိုက်မှုသို့မဟုတ်ပိုမြန်တုံ့ပြန်မှုကြိမ်တိုးမြှင့်သော်လည်းကြားနေသူတစ်ဦး cue မှနှိုင်းယှဉ်ကြပြီမဟုတ်မယ်လို့ အစောပိုင်းလှုံ့ဆော်မှု latency များအတွက်ကြားနေနှိုးဆွ။
CSB ဘာသာရပ်များတွင်အင်တာနက်-based ကြော်ငြာများနှင့်ကုထုံးရည်ညွှန်းနေတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအရှေ့ Anglia အတွက်လူထုအခြေပြုကြော်ငြာကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ CSB သင်တန်းသားများ၏ screening အင်တာနက်ကိုလိင် screening စမ်းသပ်ခြင်း (ISST) ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည်  ကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး-ဒီဇိုင်းမေးခွန်းလွှာ။ CSB ဘာသာရပ်များသူတို့ CSB များအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံ (hypersexual ရောဂါများအတွက်အဆိုပြုအဖြေရှာတဲ့စံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်သတ်မှတ်ချက်မပြည့်စုံအတည်ပြုဖို့စိတ်ရောဂါများကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည် , , ), အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း compulsive အသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်။
အားလုံး CSB ဘာသာရပ်များနှင့်အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို၏သဘောသဘာဝပေးထားသောယောက်ျားနှင့်လိင်ကွဲခဲ့ကြ. ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး2အတွက်လိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်: CSB ဘာသာရပ်များနှင့်အတူ 1 အချိုးအစား။ သီးခြားသတ်မှတ်ချက် အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ဖြစ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါများသမိုင်း၊ ဆေးခြောက်အပါအ ၀ င်တရားမဝင်ပစ္စည်းများပုံမှန်ဆေးသုံးစွဲခြင်းနှင့်လက်ရှိအလယ်အလတ် - ပြင်းထန်သောအဓိကစိတ်ကျရောဂါ (Beck Depression Inventory> 18) သို့မဟုတ် obsessive-compulsive အပါအ ၀ င်ပြင်းထန်သောစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါရှိခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်သမိုင်း၏သမိုင်း (Mini International Neuropsychiatric Inventory) ။ (အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသို့မဟုတ်လူမှုရေးမီဒီယာများ၏ပြဿနာအသုံးပြုမှု, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ် compulsive စျေးဝယ်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုအာရုံစိုကျလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်မူးရူး-အစာစားခြင်းရောဂါအပါအဝင်) အခြားထကြွလွယ်သော / compulsive မမှန်သို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲနေတဲ့စိတ်ရောဂါများကအကဲဖြတ်အဖြစ်ချန်လှပ်ခဲ့သညျ။
ဘာသာရပ်များအတွက် UPPS-P ကို ​​Impulse အပြုအမူစကေးပြီးစီး , Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory  နှင့်ပြည်နယ်စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory  အသီးသီး Impulse, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်အကဲဖြတ်ရန်။ အဆိုပါ obsessive-compulsive Inventory-R ကို obsessive-compulsive features တွေနှင့်အရက်-အသုံးပြုမှု Disorders သတ်မှတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း (စာရင်းစစ်) အကဲဖြတ်  အန္တရာယ်ရှိသောအရက်သောက်အပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်။ လူငယ်များ၏အင်တာနက်စွဲခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း (YIAT) ကို အသုံးပြု၍ အထွေထွေအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်  နှင့် compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS) ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အရွယ်ရောက်စာဖတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း  အိုင်ကျူတစ်ခုအညွှန်းကိန်းရရှိရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Written အသိပေးသဘောတူညီခကျြရရှိခဲ့သညျ, ထိုလေ့လာမှုကင်းဘရစ်သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှတက္ကသိုလ်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရပ်များ၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။
ထိုစာ '' s 'ကိုနှင့်ကီးဘုတ်၏' 'ဌ' 'သူတို့ရဲ့လက်ဝဲနှင့်လက်ယာအညွှန်းကိန်းလက်ချောင်းများအားမရစဉ်ဘာသာရပ်များကွန်ပျူတာ screen ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ ဘာသာရပ်များသူတို့ (ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံရိပ်တွေအပါအဝင်) နှစ်ခုပုံရိပ်တွေအစိမ်းရောင်အစက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြည့်ရှုမယ်လို့ပြောတယ် (ပုံ 1). တာဝန်၏ရည်မှန်းချက်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်အစိမ်းရောင်အစက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထားတဲ့အတွက်ဘေးထွက်ညွှန်ပြခဲ့. ဘာသာရပ်များနှစ်ခုပုံရိပ်တွေဖြစ်စေညာဘက် randomized နှင့် fixation လက်ဝါးကပ်တိုင် (ကြာချိန် 500 msec) ၏ကျန်ရစ်နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, တစ်ဦးအလယ်ပိုင်း fixation လက်ဝါးကပ်တိုင် (ကြာချိန် 1000-150 msec) ပြသခဲ့ကြသည်။ ပုံရိပ်တွေအခြားအလယ်ပိုင်း fixation လက်ဝါးကပ်တိုင် (ကြာချိန် 100-300 msec) နှင့်အစိမ်းရောင်ပစ်မှတ် (150 msec) ကနောက်တော်သို့လိုက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အစိမ်းရောင်ပစ်မှတ်ရုပ်တုဆင်းတုများကိုယခင်ကပြသရာ၏ဗဟိုအတွက်မျက်နှာပြင်၏လက်ဝဲဘက်သို့မဟုတ်ညာဘက်ထင်ရှား။ , ဤသည် 1750 ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ခလုတ်ကိုတုံ့ပြန်မှုကိုခွင့်ပြု msec အခြားအလယ်ပိုင်း fixation အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ နှစ်ခုပုံရိပ်တွေတစ် cue နှင့်ကြားနေထိန်းချုပ်မှုပုံရိပ်ကိုပါဝင်သည်။ တစ်ခုအကဲဆတ်သော cue (ကယောက်ျားနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြားကြည်ကြည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction က၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံရိပ်တွေ), တစ်ဦးခေါ်ဆောင်သွား cue (ကိုယ်လုံးတီးအမျိုးသမီးတစ်ဦး) နှင့်တစ်ဦးကြားနေသူတစ်ဦး cue (ဝတ်ဆင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး):3အခြေအနေများရှိခဲ့သည်။ အားလုံးကိစ္စများတွင်ထိုအတွေကိုတစ်ခုတည်းကုလားထိုင်၏ဓာတ်ပုံများကိုပါဝင်သည်ဟုပရိဘောဂကြားနေထိန်းချုပ်ရေးပုံရိပ်တွေနှင့်အတူတွဲခဲ့ကြသည်။ task ကိုကျပန်းသုံးခုအခြေအနေများမှတစ်ဆင့်နှင့်အခြေအနေကိုအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကနေ 15 ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကိုမှတဆင့်စက်လီးစီးခြင်း။ task ကိုကျပန်းကုလားထိုင်၏သုံးဆယ်ကွဲပြားခြားနားသောကြားနေထိန်းချုပ်ရေးပုံရိပ်တွေမှတဆင့်စက်လီးစီးခြင်း။ အစိမ်းရောင်ပစ်မှတ်ကျပန်းမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ်မှာထင်ရှား၏။ ဘာသာရပ်များ5စမ်းသပ်မှုတွေ၏စုစုပေါင်းအဘို့အခွအေနအေနှုန်း 40 စမ်းသပ်မှုတွေအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 120 အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှုတွေခံယူ။ အဆိုပါတာဝန် E-ချုပ် 2.0 software ကိုသုံးပြီး coded ခဲ့သည်။
ပုံ 1 ။ dot စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။
dot စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်။ အဆိုပါတွေကို (A, B) ကျပန်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ်တင်ဆက်နေတဲ့ကြားနေပရိဘောဂ cue နှင့်အတူတွဲနေတဲ့လိင်, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်ကြားနေအမျိုးသမီးတစ်ဦး cue ဖြစ်စေကိုယ်စားပြုသည်။ ဘာသာရပ်များအစိမ်းရောင်ပစ်မှတ်နှစ်ခုခလုတ်နှိပ်များထဲမှ အသုံးပြု. ပေါ်လာသောအရာအတွက်ဘေးထွက်ညွှန်ပြရန်လိုအပ်သည်. အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) နဲ့ဘာသာရပ်များနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (HV) တို့အကြားနှိုင်းယှဉ်အစောပိုင်းလှုံ့ဆော်မှုအောင်းနေချိန်များအတွက် - (RT ကိုစမ်းသပ် cue) / (RT ကိုထိန်းချုပ် + RT ကိုစမ်းသပ် cue) (ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တုံ့ပြန်မှုအချိန် (RT ကို)) အဆိုပါဂရပ်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုကိုကိုယ်စားပြု ။ အဆိုပါအမှားအရက်ဆိုင်ယုတ်၏စံအမှားကိုယ်စားပြုသည်။
အဆိုပါမူလတန်းရလဒ်များတွေကိုအကြားတုံ့ပြန်မှုအချိန် (RTdiff) တွင်ခြားနားချက် (ခေါ်ဆောင်သွား, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ, ကြားနေသူတစ်ဦး) တို့ကြားနေပရိဘောဂတွေကိုတွဲ - သုံးခုအခြေအနေများများအတွက် ((RTneutral RTcue) / (RTneutral + RTcue)). ကြိုတင်ပစ်မှတ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုများအောင်းနေချိန် (နှိုးဆွစတင်ခြင်း asynchrony; SOA) အဖြစ်ဘာသာရပ်များအစောပိုင်း Oriental တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင် inhibitory တုံ့ပြန်ထိတွေ့ဆက်ဆံရှိမရှိအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပြသထားသည် , 150 ms နှိုးဆွပေါင်း 100-200 ms fixation ကြာချိန် = 250-350:; နှောင်းပိုင်းတွင် SOA 150 ms နှိုးဆွပေါင်း 200-300 ms fixation ကြာချိန် = 350-450 ms: အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုလှုံ့ဆော်မှုအောင်းနေချိန် (အစောပိုင်း SOA အပေါ်အခြေခံပြီးနှစ်ဦးကိုသီးခြားအမျိုးအစားခွဲခြားခဲ့ကြ ဒေါ်).
ဘာသာရပ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်မေးခွန်းလွှာရမှတ်များကိုလွတ်လပ်သော t-tests သို့မဟုတ် Chi-square စမ်းသပ်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ RTdiff အချက်အလက်များကို outlier များ (ရမှတ် ၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းအထက်အုပ်စုရှိ) အတွက်စစ်ဆေးပြီးပုံမှန်စစ်ဆေးမှုကို Shapiro-Wilkes (P>3ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြန့်ဝေသည်ဟုယူဆသည်) ဖြင့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများအတွက် RTdiff ရမှတ်များပုံမှန်အားဖြင့်ဖြန့်ဝေခြင်းမရှိသောကြောင့် (P-0.05 msec အတွက် P = 0.007; P 250 = 300 msec အတွက် P = 0.04), non-parametric ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အစောပိုင်း SOA ကိုအာရုံစိုက်သည့် Kruskal-Wallis စမ်းသပ်မှုကိုအသုံးပြုသောအုပ်စုများနှင့် RTdiff ကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက် တစ်ဦး အစောပိုင်း SOA ကိုအာရုံစိုက်ဘက်လိုက်မှုကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSB ဘာသာရပ်များအတွက်ကြားနေထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြားနေလူတစ် ဦး မှမဟုတ်ဘဲကြားနေတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပိုမိုမြင့်မားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အယူအဆ။ : P <0.05 သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ အစောပိုင်း SOA အတွက် Erotic နှင့်ကြားနေထိန်းချုပ်မှုအချက်များကဲ့သို့သောအခြားဆန်းစစ်ခြင်းများနှင့်နှောင်းပိုင်း SOA အတွက်လေ့လာမှုများကိုရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေမှုဆိုင်ရာအခြေခံတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ SOA ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအတွက် Kruskal-Wallis နှင့်သက်ဆိုင်သောနမူနာများကို အသုံးပြု၍ ရှင်းလင်းသောလူတစ် ဦး စီအတွက်အစောပိုင်း SOA နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။
နှစ်ဆယ်နှစ်လိင်ကွဲ CSB နှင့်အတူယောက်ျား (အသက် 25.14 (SD က 4.68) နှစ်ကိုဆိုလိုတာ) နှင့် 44 အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက် (အသက် 24.16 (SD က 5.14) နှစ်ကိုဆိုလိုတာ) CSB မပါဘဲလိင်ကွဲအထီးကျန်းကျန်းမာမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ နှစျခု 22 CSB ၏လကျအောကျခံစိတ်မကျဆေး Antidepressants ယူပြီးသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်လူမှုရေး phobia (N ကို = 2) သို့မဟုတ်လူမှုရေး phobia (N ကို = 1) သို့မဟုတ် ADHD တစ်ကလေးဘဝသမိုင်း (N ကို = 1) ယေဘူယျ comorbid ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ CSB ဘာသာရပ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအစီရင်ခံကြသည် စားပွဲတင် 1။ ယင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လွတ်လပ်သော Kruskal-Wallis ဟာစမ်းသပ်မှုများတွင် တစ်ဦး အယူအဆ, CSB ဘာသာရပ်များ (အစောပိုင်း SOA များအတွက်အကဲဆတ်သောလှုံ့ဆော်မှု (P = 0.022) မှသော်လည်းမကြားနေသူတစ်ဦးတွေကို (p = 0.495) အား သာ. ကြီးမြတ်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုရှိခဲ့ပုံ 1) ။ ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှာတော့ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု (p = 0.529) ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုမကွဲပြားမှု (p = 0.529, p = 0.382, p = 0.649) အစောပိုင်း SOA သို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်းတွင် SOA အဘို့, အကဲဆတ်သောခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်ကြားနေသူတစ်ဦးတွေကိုလုပ်ဖို့ရှိကြ၏ (ပုံ 2).
ပုံ2။ stimulus အောင်းနေချိန်နှင့်ကုန်ကြမ်းတုံ့ပြန်မှုအချိန်ရမှတ်များ။
A. အ stimulus အောင်းနေချိန်။ အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုရမှတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) နဲ့ဘာသာရပ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအောင်းနေချိန် (:; နှောင်းပိုင်း 250-350 msec 350-450 msec အစောပိုင်း) ၏ function ကိုအဖြစ်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (HV) အတွက်ပြသထားပါသည်။ ခ CSB နှင့် HV ဘာသာရပ်များများအတွက်တွေကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ကုန်ကြမ်းတုံ့ပြန်မှုအချိန်။ အဆိုပါအမှားအရက်ဆိုင်ယုတ်၏စံအမှားကိုယ်စားပြုသည်။
ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေမှုဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုများတွင်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည်အစောပိုင်း SOA (p = 0.013) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနှောင်းပိုင်းတွင်ရှင်းလင်းသောလှုံ့ဆော်မှုကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုရှိခဲ့သည်။ သို့သော် CSB ဘာသာရပ်များတွင်ကွာခြားချက်များမရှိ (p = 0.601) ။ အလားတူစွာကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ (p = 0.404) နှင့် CSB ဘာသာရပ်များ (p = 0.550) တစ်ခုခုအတွက် SOAs နှောင်းပိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Neutral cue အတွက် SOAs သည်ခြားနားမှုမရှိပါ။ RTs အားလုံးကုန်ကြမ်းအတွက်အုပ်စုများနှင့်အချက်များနှင့်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိခြင်းနှင့် SOAs များအားလုံးအတွက်အခြေအနေများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ကြားနေထိန်းချုပ်မှုလှုံ့ဆော်မှုများ (အားလုံး p> 0.05) (ပုံ 2).
CSB ဘာသာရပ်များ (ဆွဲဆောင်မှုရမှတ်: 8.16, SD က 1.39) ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းမှဆွေမျိုးတို့သည်ကြားနေသူတစ်ဦးတွေကိုဆွဲဆောင်မှုအလားတူ ratings (; p = 7.97 1.31, SD က 0.63) ရှိခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးဘာသာရပ်များသူတို့ယခင်ကအကဲဆတ်သောသို့မဟုတ်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
'dot စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်, လေ့စွဲပုံမမှန်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုအကဲဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြုတဦးတည်းကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ CSB ဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုဦးတည်သော်လည်းမကြားနေ cues.in အစောပိုင်း SOAS ဖို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုမြှင့်တင်ရန်ရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် CSB နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအကြားဆက်ဆံရေးအခြေခံအနေနဲ့အစောပိုင်းအာရုံကို Orient တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။
cue reactivity ကိုနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအခြေခံအဆိုပါယန္တရားများကြားနေလှုံ့ဆော်မှု (အေးစက်နှိုးဆွ) အကြိမ်ကြိမ်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုနောက်ဆုံးမှာထိုကဲ့သို့သောဇီဝကမ္မ arousal သို့မဟုတ်တဏှာအဖြစ် conditional တုံ့ပြန်မှု elicits ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, အကြိုးလှုံ့ဆော်မှု (ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်) နဲ့တွဲထားတဲ့အတွက်ဂန္ထဝင်အေးစက်ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ။ အေးစက်အောက်ပါအဲဒီအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးတွေကိုမက်လုံးပေး-စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများဆည်းပူးအရှင်, salience လေးလည်းအာရုံကို biasing နှင့် '' လိုခငျြ '' ဖြစ်လာ , ။ CSB ဘာသာရပ်များအတွက်အေးစက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများညွှန်ပြနေကြသည်။
ဒါဟာကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုအနေနဲ့အစောပိုင်း Oriental အာရုံကိုတုန့်ပြန်ထုတ်ယူနိုင်ရန်ယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်အာရုံစူးစိုက်မှုကို၏ဤကနဦးအစာရှောင်ခြင်းအလိုအလျှောက်ပုံစံအပြောင်းအလဲလုပ်ဖြေရှင်းရန်အချို့ကြိုးပမ်းမှုစေသည်။ 200 msec ထက်လျော့နည်းများအတွက်တင်ဆက်အမြင်အာရုံတွေကိုကနဦးအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုကိုထင်ဟပ်ဖို့ပိုများပါတယ်။ ဘာသာရပ်များမှာအနည်းဆုံး 50 တစ် cue မှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြောင်းလဲရန်မှ msec လိုအပ်  အနည်းဆုံး 150 တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား Spatial တည်နေရာအတွက်တင်ပြအခြားဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ cue ထံမှ disengage မှ msec ။ ဆနျ့ကငျြ, msec 500 မှ 1000 ၏ကြာကြာ Duration အာရုံစူးစိုက်မှုမျိုးစုံကိုဆိုင်းရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ အားလုံးလေ့လာမှုများဒီပြသခဲ့ကြပေမယ့်, အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဆဲပါနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထင်ဟပ် . 150 အစောပိုင်း SOA နှင့် 250 နှောင်းပိုင်း SOA များအတွက် msec 350 ရန်အဘို့အ msec 350 မှ 450 စုစုပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုအောင်းနေချိန်များအတွက် fixation အချက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် msec ဘို့ငါတို့လေ့လာမှုထဲမှာ, cue တင်ဆက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ CSB ဘာသာရပ်များကျန်းမာအစောပိုင်း SOA များအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းပေမယ်နှောင်းပိုင်း SOA အဘို့အဘယ်သူမျှမအုပျစုကွဲပြားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue ပေမယ့်မကြားနေ cue ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းပြသပါ။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအစောပိုင်း SOA မှနှောင်းပိုင်းဆွေမျိုးဖို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတစ်ခုတိုးရှိသည်ထားတဲ့ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအခြေခံပေါ်မှာပြသပါ။ ဒါကစောစောပိုင်း SOA အတွက်အုပ်စုများအကြားကွာခြားချက်ဟာ CSB အုပ်စုတွင်တိုးမြှင့်အစောပိုင်း Oriental ယန္တရားများနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ နှောင်းပိုင်းလှုံ့ဆော်မှုအောင်းနေချိန်ကာလအတွင်းအုပ်စုများအကြားခြားနားချက်များ၏မရှိခြင်းယာယီအနေနဲ့အစောပိုင်း Oriental တုံ့ပြန်မှုကိုယ်စားလှယ်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်မခံကြစေခြင်းငှါကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်တိုးမြှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ msec 100 မှ 200 ထက်လျော့နည်း၏အစောပိုင်း latency ဖြေရှင်းရန်ဒီဇိုင်းနောက်ထပ်လေ့လာမှုများညွှန်ပြနေကြသည်။ abstinence ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းအမြင်အာရုံ cue များ၏ကြာချိန်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ ဥပမာအားဖြင့်, အရက်အလွဲသုံးစားမှုများအတွက်ကုသမှုတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့တိုတောင်းတဲ့ကြာချိန်အရက်သေစာတွေကို (100 msec) ဆီသို့ဦးတည်အာရုံစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုပေမယ့်တာရှည်ကြာချိန်အရက်သေစာတွေကို (500 msec) အားတုံ့ပြန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအတူအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းရှိသည်ကိုပြသခဲ့ကြသည် , ။ စွဲလမ်းမှုမှရရှိသောရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များအားအပြန်အလှန်ကောက်ယူခြင်းအာရုံစူးစိုက်မှုအားဖိနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တားဆီးရန်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကြိုးပမ်းမှုများသို့မဟုတ်တဏှာ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှေးကွေးခြင်းတို့ကြောင့်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါသည်။ , ။ တစ်ခုချင်းစီကိုတာဝန်အတွက်ထိခိုက်ဘာသာရပ်များ arousal သို့မဟုတ်တဏှာသွေးဆောင်ခြင်းအလိုငှါလှုံ့ဆော်မှု provocative ထိတွေ့နေကြပေမယ့်ဒါတွေကဖြစ်နိုင်သောသဖွငျ့အချက်များ, အထူးသဖြင့်တိုတောင်း SOAS နှင့်တကွ, အစက်စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်နှင့်အတူပြဿနာများ၏လျော့နည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ SOA အမြင်အာရုံအမြင်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအတွက် cue ၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုအညွှန်းကိန်းပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပဏာမလေ့လာမှု 450 msec အထိတစ်ဦးအောင်းနေချိန်များအတွက်အနည်းဆုံး inhibitory ဖြစ်စဉ်များ CSB ဘာသာရပ်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာမပြုစေခြင်းငှါအကြံပြု. အနည်းဆုံးအား 500 msec ၏ရှည်ကြာချိန်တွေကိုအပါအဝင်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် inhibitory ဖြစ်စဉ်များ၏ဆဲပါနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အလားအလာအခန်းကဏ္ဍအကဲဖြတ်ရန်ညွှန်ပြနေကြသည်.
တနည်းအားဖြင့်ရလဒ်တွေ CSB ဘာသာရပ်များအတွက်အကဲဆတ်သောလှုံ့ဆော်မှုများ၏အမျိုးအစားနှင့်အတူကျွမ်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ အသုံးပြုမှု-လွတ်လပ်သောထိတွေ့မှုများအတွက်တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှအခန်းကဏ္ဍအာရုံစူးစိုက်မှုလူနာတစ်ဦး Stroop တာဝန် အသုံးပြု. ဘက်လိုက်မှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုစက်ရုံအတွက်န်ထမ်းတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုအကြားခြားနားချက်များ၏မရှိခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးအကြံပြုထားသည် ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုအသုံးပြုမှု-လွတ်လပ်သောထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်တဲ့အမြင်အာရုံရှာဖွေရေးပါရာဒိုင်းအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်အာရုံစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုတို့အကြားဆက်ဆံရေးကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ် ။ သိသိသာသာအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအတွက်တက်ကြွစွာဆေးလိပ်သောက်သူများအဘို့အပြခံခဲ့ရသော်လည်း Non-အားကစားနိူးအားကစားတွေကိုအဘို့အအစောပိုင်း SOA အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုအတွက်မည်သည့်ခြားနားချက်ကိုပြသရန်ပျက်ကွက်သာရှိပြီးပြည်ပမှအားကစားနိူးလေ့လာနေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေကျွမ်း disambiguate ရန်ကြိုးစားခဲ့သောအစက်စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်သုံးပြီးသို့သော်လေ့လာမှုတစ်ခု ဆေးလိပ်သောက်တွေကိုအဘို့အအစောပိုင်း SOA ။ ကျွမ်း disentangling အပေါ်အထူးအာရုံစူးစိုက်သောဤလေ့လာမှုတိုင်းတာအဖြစ်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏အစောပိုင်းဖမ်းယူ 'dot စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်သုံးပြီးကျွမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြု ။ ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအမျိုးအစားနှင့်အတူကျွမ်းတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှနိုင်ပေမယ့်ထို့ကြောင့်က dot စုံစမ်းစစ်ဆေး task ထဲမှာအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏အစောပိုင်းဖမ်းယူဖို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်နိုင်သည်။
ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုဖို့အစောပိုင်း Oriental တုံ့ပြန်မှုလိင်သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ salience မီးမောင်းထိုးပြ, မမျှော်လင့်ဘဲ CSB ဘာသာရပ်များနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအကြားအလားတူမဟုတ်ခဲ့ခဲ့. Non-နှစ်သက်သောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မျက်စိ-ခြေရာခံလိင်ပိုမိုနှစ်သက်လှုံ့ဆော်မှုမှကာလအတွင်းပထမဦးဆုံး fixation နှင့်ဆွေမျိုး fixation အချိန်အရေအတွက်အားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ကျန်းမာအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအာရုံစိုက်မြှင့်တင်ရန်ကနဦးတိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြခဲ့ကြ ။ အလားတူပင်ကျန်းမာအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများ၏မျက်နှာများပေါ်တွင်ထက်အလောင်းတွေပေါ်မှာကြာကြာအာရုံစူးစိုက် ။ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် Non-ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုသည့်အခါကျန်းမာယောက်ျားလည်းလူတို့အားနှိုင်းယှဉ်မိန်းမတို့အားအမြင်အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်အားပြခဲ့ကြ ။ အလားတူပင် 500 msec တစ်ခု SOA နှင့်အတူအစက်စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်သုံးပြီးကျန်းမာတဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှပိုကောင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူပတျသကျပြထားပြီး . ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလှုံ့ဆော်မှု differential CSB ဘာသာရပ်များနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုထံမှလုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလှုံ့ဆော်မှုဤအရပ်မှအာရုံစူးစိုက်ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့် CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အစောပိုင်း Oriental တုံ့ပြန်မှုစားစရာ, မူးယစ်ဆေး-cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်သူတို့အားအလားတူအေးစက်တွေကိုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်စေခြင်းငှါ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းထဲမှာ, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ် Conditions တွေကိုပြုမူပေမယ်အဖြစ်လိင်သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, ဆဲအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတစ်ခုနောက်ဆုံးတိုးမြှင့်စားစရာမပေးစေခြင်းငှါသော်လည်း။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအလားတူလိင်သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိတွေ့ရှိချက် CSB ဘာသာရပ်များအတွက် ventral striatum အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို, amygdala နှင့် dorsal anterior cingulate လှုပ်ရှားမှု, စွဲလမ်းပုံမမှန်အတွက်မူးယစ်ဆေး cue reactivity ကိုအတွက် activated တူညီသောကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်ရှိသည်ဟုသောငါတို့မကြာသေးမီလေ့လာရေးနှင့်အတူ dovetail . ဒီအာရုံကြောကွန်ယက်ကိုတိုးမြှင်အလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်လိုသောနှင့်မအကြိုက် CSB သက်ဆိုင်ဖြစ်ခြင်းမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏သီအိုရီအဘို့အထောက်ခံမှုပေးသည်နှင့်အတူ CSB ဘာသာရပ်များအတွက်ဆက်နွယ်နေပါသည်သော။ အရက်, နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းအပါအဝင်အလွဲသုံးစားလုပ်၏ဝတ္ထုများကိုဖြတ်ပြီး cue reactivity ကိုအတွက်လေ့လာမှုတစ်ဦးကအရေအတွက် Meta-analysis သည် Self-အစီရင်ခံ cue-သွေးဆောင်ဖို့လှုပ်ရှားမှုထပ်နှင့်တကွ, ပု ventral striatum အတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုမှ dorsal anterior cingulate (dACC) နှင့် amygdala ထပ်လှုပ်ရှားမှုပြသ dACC, pallidum နှင့် ventral striatum အတွက်တဏှာ . အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်ပြုပြင်ထားသောအစက်စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်အသုံးပြုခြင်း, အရက်မှီခိုဘာသာရပ်များ ventral နှင့် dorsal striatum နှင့် amygdala, အ orbitofrontal cortex အတွက်ပိုကောင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုဦးတည်ထားတဲ့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှစ်ခုလုံးရှိသည်ဖို့ပြသခဲ့ကြသည် ။ အဆိုပါစာရေးဆရာပစ္စည်းဥစ္စာ-related လှုံ့ဆော်မှုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှု၏အတိုင်းအတာများကြောင့်ဤအဒေသများတွင် cue-သွေးဆောင် activation ရန်, ထိုကဲ့သို့သော ACC နှင့် striatum အဖြစ်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းတွေးဆ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိတိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏တွေ့ရှိချက်များနှင့် CSB ဘာသာရပ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတစ်ခုအစောပိုင်း Oriental တုံ့ပြန်မှု CSB အတွက် operating မက်လုံးပေး salience ယန္တရားများမှထပ်မံထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုအများအပြားန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ သာလိင်ကွဲအထီးဘာသာရပ်များကိုလေ့လာခဲ့ကြနှင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအမျိုးမျိုးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းစီဆနျးစစျသငျ့တယျ ။ အဆိုပါဘာသာရပ်များယာယီအဖြေရှာတဲ့စံမပြည့်စုံခြင်းနှင့်မျိုးစုံအတည်ပြုအကြေးခွံကိုအသုံးပြုပြီးလိင်နှင့်စပ်လျဉ်း functional ဖြစ်စေချွတ်ယွင်းသရုပ်ပြပေမယ့်လည်းလက်ရှိအရှင်တွေ့ရှိချက်များ၏ယေဘုယျကန့်သတ်, CSB အဘို့အဘယ်သူမျှမပုံမှန်ရောဂါရှာဖွေစံရှိမတည်ရှိ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကဤအစီအမံပြည်နယ်သို့မဟုတ်ရို related ဖြစ်နိုင်သည်ရှိမရှိဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါကန့်သတ်အသက်အပိုင်းအခြားလည်းယေဘုယျကန့်သတ်လိမ့်မည်။ နည်းပါးလာကွဲပြားခြားနားသောကြားနေထိန်းချုပ်ရေးပုံရိပ်တွေကျပန်းမတူညီသော cue ပုံရိပ်တွေမှဆွေမျိုးပြသခဲ့ကြသည်အဖြစ်သူတို့လျော့နည်းမကြာခဏတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်သကဲ့သို့, ကြားနေထိန်းချုပ်ရေးပုံရိပ်တွေများ၏အချက်အလက်တန်ဖိုး cue ပုံရိပ်တွေထက်လျော့နည်းပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဒီဇိုင်းအလားတူအရာဝတ္ထုနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်တွေကိုလူဖြစ်ကြောင်းကိုပေးသော cue ဓါတ်ပုံတွေကိုဦးတည် biased ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်ဒီဇိုင်းများ cue နှင့်ထိန်းချုပ်မှုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ပုံရိပ်ကိုတင်ဆက်မှု၏ကြိမ်နှုန်းကိုက်ညီခြင်းနှင့်လူဦးထက်တ္ထုများ (ဥပမာ, အအကဲဆတ်သောအခွအေနေအဘို့ပွဲစဉ်အဖြစ်အပြန်အလှန်လူနှစ်ဦး) ၏အမျိုးအစားကိုက်ညီသင့်ပါတယ်။
အဲဒီအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုမူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာဆုလာဘ်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မမှန်ဆီသို့ရှုထောင်ချဉ်းကပ်မှုအတွက်အရေးပါသော Construction အဖြစ်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုများအတွက်အလားအလာအခန်းကဏ္ဍအကြံပြု . CSB ဘာသာရပ်များအတွက်ပိုကောင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်စှဲပုံမမှန်အတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုလေ့လာမှုတွေအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှထပ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကြောင့်ဆေး cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနှင့် CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရန်ထစ်အငေါ့တုံ့ပြန်မှုအခြေခံစွဲ၏မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီအဘို့အထောကျပံ့ပေးအလားတူကွန်ယက်အတွက် CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြော reactivity ကို၏မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဆုံ။
ကျနော်တို့ Wolfson ဦးနှောက် Imaging Center မှာလေ့လာမှုနှင့်ဝန်ထမ်းများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသောသူအပေါင်းတို့သည်သင်တန်းသားများကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ channel4လေ့လာမှုအဘို့အင်တာနက်-based ကြော်ငြာများအားမရသဖြင့်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူကူညီများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုအများအားဖြင့် Wellcome Trust မှမိဿဟာထောက်ပံ့ငွေ (093705 / Z ကို / 10 / Z ကို) မှတစ်ဦးထောက်ပံ့ငွေများကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Potenza ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ထံမှထောက်ပံ့ငွေ P20 DA027844 နှင့် R01 DA018647 နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲန်ဆောင်မှုများ၏ Connecticut ပြည်နယ်ဦးစီးဌာန, အဆိုပါ Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာတွင်; နှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသား Center မှသုတေသနဆုကိုလောင်းကစားအတွက် Excellence တစ်ရေးစင်တာ။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
1 ။ Fong သည် TW (2006) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုနားလည်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု (Edgmont) 3: 51-58 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
2 ။ တစ်ကောလိပ်နမူနာအတွက် Odlaug BL, Grant က je (2010) Impulse-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမင်နီဆိုတာ Impulse Disorders အင်တာဗျူး (MIDI) မှရလဒ်များကို။ Prim စောင့်ရှောက်အဖော် J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ Odlaug BL, တဏှာ K ကို Schreiber LR, Christenson, G, Derbyshire K သည်, et al ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် (2013) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 25: 193-200 [PubMed]
4 ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအတွက် je, Levine L ကိုကင်မ်: D, Potenza MN (2005) Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်ပေးသနား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 162: 2184-2188 [PubMed]
5 ။ Kor တစ်ဦးက, Fogel က Y, ရိဒ် RC, Potenza MN (2013) Hypersexual Disorder တစ်ခုစွဲအဖြစ်ခွဲခြားခံရသငျ့သလော လိင်စွဲ compulsive 20 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
6 ။ အစည်းအရုံးက AP (2013) Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏စာရင်းအင်းကို manual ။ Arlington, VA သို့: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး။
7 ။ Kafka အမတ် (2010) Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်အဆိုပြုရောဂါ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 39: 377-400 [PubMed]
၈။ Petry NM၊ O'Brien CP (၂၀၁၃) အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် DSM-8 ။ စွဲ 2013: 5-108 [PubMed]
9 ။ Cousijn J ကို, Watson P ကို, Koenders L ကို, Vingerhoets WA, Goudriaan AE, et al ။ ဆေးခြောက်စကား (2013) ဆေးခြောက်မှီခို, သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 38: 2825-2832 [PubMed]
10 ။ ecstasy-related အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအခြေခံ Roberts သည် GM က, Garavan H ကို (2013) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 213: 122-132 [PubMed]
၁၁။ Wiers RW, Eberl C, Rinck M, Becker ES, Lindenmeyer J (၂၀၁၁) အလိုအလျောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုပုံစံများကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည်အရက်သမားလူနာများ၏ချဉ်းကပ်မှုကိုဘက်လိုက်ခြင်းနှင့်ကုသမှုရလဒ်ကိုတိုးတက်စေသည်။ Psychol သိပ္ပံ 11: 2011-22 [PubMed]
12 ။ ဗန် Hemel-Ruiter ME, de Jong က PJ, Oldehinkel AJ, Ostafin bd (2013) ဆုကြေး-related အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း: အ Trail လေ့လာမှု။ Psychol စွဲပြုမူနေ 27: 142-150 [PubMed]
13 ။ Ersche KD, Bullmore ET, Craig KJ, Shabbir အက်စ်အက်စ်, အာဘော့က S, et al ။ လှုံ့ဆော်မှီခိုအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ dopaminergic မော်ဂျူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု compulsive ၏ (2010) သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 67: 632-644 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Potenza MN (2014) ဘက်လိုက်မှုအပြုအမူတွေ: စှဲအတွက်အားနည်းချက်နှင့်ခံနိုင်ရည်အချက်များနားလည်သဘောပေါက်ဆီသို့ဦးတည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 75: 94-95 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ Fineberg NA, et al Chamberlain SR, Goudriaan AE, Stein DJ သမား, Vanderschuren LJ ။ လူ့ neurocognition အတွက် (2014) နယူးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု: လက်တွေ့မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဦးနှောက်ပုံရိပ် Impulse နှင့် compulsive ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ CNS Spectr 19: 69-89 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေအတွက်ကွင်းဆင်း M က, ကော့ WM (2008) အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု: တစ်က၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သုံးသပ်ချက်ကို, အကြောင်းတရားများနှင့်အကျိုးဆက်များ။ 97-1 [: မူးယစ်ဆေးအရက် 20 ပြုမှPubMed]
17 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC (1993) မူးယစ်တဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗြာ 18: 247-291 [PubMed]
18 ။ Mogg K ကိုကွင်းဆင်း M က, Bradley ကို BP (2005) အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်တွေကိုဆေးလိပ်များအတွက်: စွဲ၏သီအိုရီအမြင်များယှဉ်ပြိုင်တစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ Psychopharmacology (Berl) 180: 333-341 [PubMed]
19 ။ ကော့ WM, Fadardi JS, Pothos EM (2006) ကစွဲ-stroop စမ်းသပ်: သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြံပြုချက်များ။ Psychol Bull 132: 443-476 [PubMed]
20 ။ Robbins SJ, Ehrman RN (2004) ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ ပြုမူနေ Cogn neuroscience ဗြာ 3: 243-260 [PubMed]
21 ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက်ကွင်းဆင်း M (2006) အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု: သိမြင်မှုယန္တယား, အကြောင်းတရားများ, အကျိုးဆက်များနှင့်သက်ရောက်မှုတွေ; Munafo M က, Albery ဗြဲ, အယ်ဒီတာ။ အောက်စဖို့ဒ: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
22 ။ ဘိန်းဖြူမှီခိုအတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အ Franken ih, Stam CJ, Hendrik VM က, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က (2003) Neurophysiological သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology (Berl) 170: 205-212 [PubMed]
23 ။ Mogg K ကို Bradley ကို BP, ဖျော်ဖြေမှု M က, De Houwer J ကို (2003) မျက်လုံးလှုပ်ရှားမှုများကိုဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆေးလိပ်သောက်-related ဓါတ်ပုံတွေကိုမှ: အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု valence ၏သွယ်ဝိုက်များနှင့်အကဲဆတ်သောအစီအမံများအကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ စွဲ 98: 825-836 [PubMed]
24 ။ Ross RB, Johri S က, Kendrick K ကိုဟက် AL, Alim TN, et al ။ ကိုကင်းမတရားသော၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်စပ်: တစ်ကင်း cue ၏အမြင်အာရုံစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စဉ်အတွင်း (1997) Preattentive နှင့်စေ့စေ့နားထောင်မျက်စိလှုပ်ရှားမှုများ။ J ကို Neuropsychiatry Clin neuroscience 9: 91-93 [PubMed]
25 ။ obsessive compulsive ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် Hartston HJ, Swerdlow ရော်ဘာ (1999) Visuospatial Prime နှင့် stroop စွမ်းဆောင်ရည်။ Neuropsychology 13: 447-457 [PubMed]
26 ။ Klein AA ကို abstinent အရက်သမားအတွက်အကြံအစည်များ (2007) နှိမ်နင်းရေး-သွေးဆောင် hyperaccessibility: တစ်ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ ပြုမူနေ Res Ther 45: 169-177 [PubMed]
27 ။ Algom: D, Chajut အီး, Lev S ကို (2004) ကစိတ်ခံစားမှု stroop ဖြစ်ရပ်ဆန်းမှာတစ်ဦးကဆင်ခြင်တုံတရားကြည့်: တစ်ယေဘုယျကျဆင်းမှု, မတစ်ဦး stroop အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Exp Psychol ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 133: 323-338 [PubMed]
28 ။ Mogg K ကို Bradley ကို BP, Dixon ကနေ C, HT က F, Am (2000) စရိုက်များစိုးရိမ်စိတ်, ကာကွယ်ရေးနှင့်ရွေးချယ် processin gof ခြိမ်းခြောက်မှု: အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှစ်ခုအစီအမံကို အသုံးပြု. စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ 28: 1063-1077
29 ။ Fox ကအီး, Russo R ကို, Bowling R ကို, Dutton သည်ငွေကျပ် (2001) ခြိမ်းခြောက်လှုံ့ဆော်မှု subclinical စိုးရိမ်စိတ်အတွက်အမြင်အာရုံကိုဆွဲသို့မဟုတ်ကိုင်ထားသလား? J ကို Exp Psychol ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 130: 681-700 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ Mogg K ကို Bradley ကို BP, Non-လက်တွေ့စိုးရိမ်စိတ်အတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုသတင်းအချက်အလက်များအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏က de Bono J ကို, ပန်းချီဆရာ M (1997) အချိန်သင်တန်း။ ပြုမူနေ Res Ther 35: 297-303 [PubMed]
31 ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းအတွက် MacLeod ကို C, Mathews တစ်ဦးက, တာတာ: P (1986) အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol 95: 15-20 [PubMed]
32 ။ Cisler JM, Koster Eh (2010) စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်အတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ယန္တရားများ: အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ Clin Psychol ဗြာ 30: 203-216 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Gotlib ih, Kasch KL, Traill S က, Joormann J ကို, Arnow BA, et al ။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်လူမှုရေး phobia အတွက်သတင်းအချက်အလက်-အပြောင်းအလဲနဲ့ဘက်လိုက်မှု၏ (2004) ဆိုနိုင်ပါတယ်နှင့်သတ်မှတ်ချက်။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol 113: 386-398 [PubMed]
34 ။ abstinent အရက်သမားအတွက်အမြင်အရက်သေစာတွေကို Stormark KM, ဖျော်ဖြေမှု NP, Hugdahl K ကို Horowitz က M (1997) ရွေးချယ်အပြောင်းအလဲနဲ့: တစ်ခုချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားပဋိပက္ခ? စွဲလမ်းစေအပြုအမူ 22: 509-519 [PubMed]
35 ။ နို X ကို, Colmant M က, et al ဗန် Der Linden M က, Bechara တစ်ဦးက, Bullens မေး။ abstinent အရက်သမားလူနာအတွက်အရက်တွေကိုအဘို့အာရုံစူးစိုက်မှု၏ (2006) အချိန်သင်တန်း: ကနဦး Oriental ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အရက် Clin Exp Res 30: 1871-1877 [PubMed]
36 ။ Delmonico DL, Miller က, ဂျေအေ (2003) အင်တာနက်လိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်: Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်။ လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကုထုံး 18 ။
37 ။ ရိဒ် RC, လက်သမား BN, Hook ဖြစ်မှု, Garo S က, Manning JC, et al ။ hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-2012 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိချက်များ (5) အစီရင်ခံစာ။ J ကိုလိင် Med 9: 2868-2877 [PubMed]
38 ။ အဆိုပါ Net က၏အရိပ်၌ Carnes P ကို, Delmonico DL, Griffin အီး (2001): compulsive အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 2nd Ed ကမှအခမဲ့ Breaking ။ Center ကိုစီးတီး, မင်နီဆိုတာ: Hazelden
39 ။ Sheehan DV, Lecrubier Y ကို, Sheehan KH, Amorim P ကို, Janavs J ကို, et al ။ (1998) က Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (MINI): DSM-IV နှင့် ICD-10 များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဖြေရှာတဲ့စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် validation ကို။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု 59 ၏ဂျာနယ်: 22-33 [PubMed]
40 ။ Whiteside SP, Lynam DR (2001) ကငါးအချက်မော်ဒယ်နှင့် Impulse: Impulse ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ 30: 669-689
41 ။ Beck ကို AT, ရပ်ကွက် CH, Mendelson M က, ကဲ့ရဲ့ J ကို, Erbaugh J ကို (1961) စိတ်ကျရောဂါကိုတိုင်းတာဘို့တစ်ခုစာရင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 4: 561-571 [PubMed]
42 ။ Spielberg CD ကို, Gorsuch RL, Lushene R ကို, Vagg PR စနစ်, နိုင်ငံတော်-စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory များအတွက် Jacobs GA (1983) လက်စွဲ။ Palo Alto, CA: စိတျပညာစာနယ်ဇင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း။
43 ။ Saunders JB, Aasland ဩဃတို့သည်အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Disorders သတ်မှတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း (စာရင်းစစ်) ၏ Babor TF (1993) de la Fuentes JR (1993) Grant က M ကို (1993) ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: အန္တရာယ်အရက်စားသုံးမှု-II ကိုအတူ Persons ၏အစောပိုင်းထောက်လှမ်းခြင်းအပေါ် WHO ကပူးပေါင်းစီမံကိန်း။ စွဲ 88: 791-804 [PubMed]
44. လူငယ် KS (1998) အင်တာနက်စွဲခြင်း - လက်တွေ့ရောဂါအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်း။ Cyberpsychology & အပြုအမူ ၁: ၂၃၇ - ၂၄၄
45. Meerkerk GJ, Van Den Eijnden RJJM, Vermulst AA, Garretsen HFL (2009) The Compulsive Internet Use Scale (CIUS): အချို့သော Psychometric Properties များ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ ၁၂: ၁-၆ [PubMed]
46 ။ နယ်လ်ဆင် HE (1982) အမျိုးသားလူကြီးစာဖတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း။ Windosr, ဗြိတိန်: NFER-နယ်လ်ဆင်။
47 ။ လူ့ရူပါရုံကိုအာရုံစူးစိုက်မှု၌ကျိန်းဝပ်အချိန် Duncan က J ကို, ရပ်ကွက် R ကို, Shapiro ငွေကျပ် (1994) တိုက်ရိုက်တိုင်းတာခြင်း။ သဘာဝတရား 369: 313-315 [PubMed]
48 ။ Theeuwes J ကို, Godljn R ကို (2002) နှင့်မသက်ဆိုင်သော Singleton အာရုံကိုဖမ်းယူ: ပြန်လာ၏တားစီးကနေသက်သေအထောက်အထား။ အမြင် Psychophys 64: 764-770 [PubMed]
49 ။ မြင့်အနိမ့်ရိုစိုးရိမ်စိတ်အတွက်ဓာတ်ပုံများကိုခြိမ်းခြောက်ဘို့အာရုံစူးစိုက်မှု၏ Koster Eh, Verschuere B, Crombez, G, ဗန် Damme S ကို (2005) အချိန်-သင်တန်း။ ပြုမူနေ Res Ther 43: 1087-1098 [PubMed]
50 ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုအတွက် Bradley ကို BP, Mogg K ကို Wright T က, ဖျော်ဖြေမှု M (2003) အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု: ဆေးလိပ်သောက်အတွက်စီးကရက်-related တွေကိုအဘို့သတိဝီရိယ။ Psychol စွဲပြုမူနေ 17: 66-72 [PubMed]
51 ။ ရိုင်ယန်က F (2002) အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်အရက်မှီခို: ပြုပြင်ထားသော stroop ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးထိန်းချုပ်လေ့လာမှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 27: 471-482 [PubMed]
52 ။ အိုလီဗာဂျာ Drobes DJ သမား (2012) ဆေးလိပ်သောက်တွေကိုအဘို့အ Visual ရှာဖွေရေးနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု: ကျွမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Exp Clin Psychopharmacol 20: 489-496 [PubMed]
53 ။ Chanon VW တို့, အချဉ် CR, Boettiger, CA (2010) တက်ကြွစွာဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်စီးကရက်တွေကိုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 212: 309-320 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54 ။ Fromberger P ကို, ဂျော်ဒန် K သည်, et al ဗွန်တို့၏တိရစ်ဆာနျထိနျးကြောငျး J ကို, Steinkrauss H ကို, Nemetschek R ကို။ လိင်ကသက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ (2012) ကနဦးအရှေ့တိုင်းဆန်: မျက်စိလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာအနေဖြင့်ပဏာမသက်သေအထောက်အထား။ Arch လိင်ပြုမူနေ 41: 919-928 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
55 ။ မျက်စိ-ခြေရာခံခြင်းနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် Non-ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှ Lykins အေဒီ, Meana M က, Kambe, G differential ကိုကြည့်ရှုပုံစံများ (2006) ထောက်လှမ်းခြင်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ 35: 569-575 [PubMed]
56 ။ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် Non-ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှအမြင်အာရုံအာရုံစိုက်မှုအတွက် Lykins အေဒီ, Meana M က, Strauss မိသားစုဆရာဝန် (2008) လိင်ကွဲပြားမှု။ Arch လိင်ပြုမူနေ 37: 219-228 [PubMed]
57 ။ Prause N ကို, Janssen အီး, Hetrick WP (2008) အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု။ Arch လိင်ပြုမူနေ 37: 934-949 [PubMed]
58 ။ Voon V ကို, မှဲ့တီဘီ, BANCA P ကို, Porter L ကို, မောရစ် L ကို, et al ။ (စာနယ်ဇင်းအတွက်) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
59. Kuhn S, Gallinat J (၂၀၁၁) တရားဝင်နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတွန်းအားပေးခြင်း၏ပုံမှန်ဇီဝဗေဒ - cue-reactivity ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုကို meta-analysis လုပ်ခြင်း။ Eur J ကို Neurosci 2011: 33-1318 [PubMed]
60 ။ Vollstadt-Klein က S, Loeber S က, ရစ်ချတာတစ်ဦးက, Kirsch M က, Bach P ကို, et al ။ အရက်-မှီခိုလူနာ mesolimbic cue reactivity ကိုနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတို့အကြားအသင်းအဖွဲ့: (2012) အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့်အတူမက်လုံးပေး salience အတည်ပြု။ စှဲလမျးသူ Biol 17: 807-816 [PubMed]
61 ။ Co-ဖြစ်ပေါ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်လိင်ကွဲပြားမှု: ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအတွက် Grant က je, Williams က ka, Potenza MN (2007) Impulse-ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 68: 1584-1592 [PubMed]
62 ။ Insel T က, Cuthbert B, Garvey M က, Heinssen R ကို, ထင်းရူး DS, et al ။ (2010) သုတေသနဒိုမိန်းစံ (RDoC): စိတ်ရောဂါသုတေသနအသစ်တစ်ခုခွဲခြားမူဘောင်ဆီသို့။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 167: 748-751 [PubMed]
Robert Weiss LCSW မှ“ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုကမသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုအခြားစွဲလမ်းမှုနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးသည်